Madaxweynaha oo canantay Dhega Badan | Gedoonline
Madaxweynaha oo canantay Dhega Badan	Added by Editor on July 30, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho(GMN)-Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif oo Maanta gaaray Degmadda Afgooye ee gobbolka Sh/Hoose ayaa canaan dhegaha u saaray saraakiisha Dowladda ee degmadaasi ku sugan.
Madaxweynaha ayaa saraakiisha uu canaanta la dul dhacay waxaa ka mid ahaa Abaandulaha ciidamadda Gen. Dhega Badan.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in Saraakiisha ay ku guul dareysteen xaqiijinta ammaanka Degmadda Afgooye.
Gen. Dhega Badan oo dhinac taagnaa Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay ogalaadeen cananta Madaxweynaha Soomaaliya.
Generaalka ayaa hoosta ka xariiqay in si ay u sugaan ammaanka ay xabsig.a dhigeen saraakii ka mid ah ciidamadda Dowladda Somalia.
Dhega badan:-Waa ka badbaaday qaraxa.
Dhaga Badan: Dhibkuba waa Shabaabka soo goystay
Kooxo hubeysan oo weerar ka geystay Afgooge
Shabaab Shabeelaha hoose lagu dilay